China Composite SMC BMC umfutholuketshezi cindezela Ukwakha futhi Factory | UZhengxi
Umshini wethu wokucindezela u-hydraulic ufanelekile ekubunjweni kwezinto ezibonakalayo:
Izingxenye ze-SMC (Sheet Molding Compound)
Izingxenye ze-BMC (Bulk Molding Compound)
Izingxenye ze-RTM (Resin Transfer Molding)
Kusetshenziswa izinhlelo ezahlukahlukene, kuya ngezidingo zezinto kanye nenqubo yokukhiqiza. Umphumela: Izingxenye ezihamba phambili zekhwalithi nokwethembeka okuphezulu kokukhiqizwa - kokusebenza kahle kwezomnotho nokukhiqiza okuphezulu.
ZHENGXI SMC BMC umfutholuketshezi Cindezela obizwa nangokuthi ama-hydraulic composites molding press, isetshenziswa ekubunjweni kokubumba kokuhlanganiswa kwezinto ezifana ne-SMC, i-BMC, i-FRP, i-GRP njalonjalo. Imishini yethu yokunyathelisa ye-SMC kanye nabezindaba banikela ngamakhono wokukhiqiza aphezulu embonini, kanye nezindlela zokulungisa nezokuthuthukisa. Sinikezela ngamasiko amasha wokubumba we-hydraulic, futhi i-ZHENGXI aslo inikeza uhlu olubanzi lwezinketho zokulungisa nezokuthuthukisa zezinto ezikhona zokucindezela ukubunjwa kwazo zonke izinhlobo namamodeli. Imishini yethu yokubumba i-hydraulic isetshenziselwa ukukhiqiza izinhlobo eziningi zezimoto ezintsha, i-aerospace, izimboni njll.
 Isetshenziselwa ikakhulukazi ukwakheka okubalulekile kwamapulasitiki e-thermosetting (FRP) nemikhiqizo ye-thermoplastic. Ifanele ukwakheka kwe-SMC, BMC, i-DMC, i-GMT namanye ama-bulks namashidi.
Uhlelo lwe-Hydraulic lufakwe phezulu ngeplatifomu yesondlo, imvelo, umsindo ophansi nokugcinwa kalula.
 Isigaba sejubane esisheshayo esinejubane esakha kancane, isikhathi sokukhipha esigodliwe.
Ngokusebenza kwesikhunta sokuvula okuhamba kancane, esifanele imikhiqizo ephezulu.
Ukuphendula okusheshayo kohlelo, uhlelo lokulawula izinombolo.
Lo mshini ikakhulukazi efanelekayo esiyinhlanganisela udini impahla; imishini ine-rigidity enhle yohlelo nokunemba okuphezulu, impilo ephezulu nokuthembeka okuphezulu. Inqubo yokwenza umshini oshisayo ihlangabezana namashifu amathathu / ukukhiqizwa kosuku.
JB / T3818-99 《Izimo zobuchwepheshe zomshini wokubacindezela》
GB / T 3766-2001 《Izidingo ezijwayelekile zobuchwepheshe bezinhlelo zokubacindezela》
GB5226.1-2002 《Ukuphepha kwemishini-Okomshini nokwamandla kagesi-Ingxenye 1: Izidingo ezijwayelekile zobuchwepheshe》
GB17120-97 《Cindezela izidingo zokuphepha kwemishini》
JB9967-99 《Umkhawulo womsindo womshini we-Hydraulic》
JB / T8609-97 《Cindezela imishini yokushisela izimo zobuchwepheshe》
Uhlobo lozimele H
Uhlobo lwekholomu engu-4
Minatem Iyunithi YZ71-4000T YZ71-3000T YZ71-2500T YZ71-2000T YZ71-1500T YZ71-1000T
Ingcindezi kN 40000 30000 25000 20000 15000 10000
UMax. ingcindezi ketshezi UMpa 25 25 25 25 25 25
Khwezi Mm 3500 3200 3000 2800 2800 2600
Unhlangothi Mm 3000 2600 2400 2200 2200 2000
Ukusebenza usayizi wethebula Mm 4000 × 3000 3500 × 2800 3400 * 2800 3400 * 2600 3400 * 2600 3400 * 2600
Ukuphakama ngaphezu komhlaba Mm 12500 11800 11000 9000 8000 7200
Ukujula kwesisekelo mm 2200 2000 1800 1600 1500 1400
Ijubane eliphansi Mm / s 300 300 300 300 300 300
Isivinini Ukusebenza Mm / s 0.5-5 0.5-5 0.5-5 0.5-5 0.5-5 0.5-5
Isivinini sokubuyisa Mm / s 150 150 150 150 150 150
Amandla Aphelele kW 175 130 120 100 90 60
Idizayini yawo wonke umshini isebenzisa ukwenziwa kwekhompyutha nokwenza kahle ihlaziya ngento enomkhawulo. Amandla nokuqina kwemishini kuhle, futhi ukubukeka kuhle. Zonke izingxenye ezihlanganisiwe zomzimba womshini ziboshwe ngensimbi ephezulu yensimbi engu-Q345B yensimbi, ehlanganiswe ne-carbon dioxide ukuqinisekisa ikhwalithi ye-welding.
Kwenziwe ngensimbi engu-45 # eqoshwe, ukucisha nokushisa
Ukugaya kahle ngemuva kokugoqa
Kwenziwe nge-Chilled cast iron, ukucima nokushisa
Ubuso busongwe bese bufakwa i-chrome ukuqinisekisa ubulukhuni bendawo ngaphezu kwe-HRC48 ~ 55
Hlakulela indandatho yokufaka uphawu lwekhwalithi yomkhiqizo waseJapan
Kuqondiswa ukufakwa ngethusi, ukumelana nokugqoka okuhle, ukuqinisekisa ukusebenza kwesilinda isikhathi eside
Amakholomu wokuqondisa (izinsika) azokwenziwa I-C45 yensimbi yokwakha eshisayo futhi ube nokuqina okuqinile kwe-chrome 0.08mm. Futhi yenza ukuqina nokuqinisa ukwelashwa. Umkhono womhlahlandlela usebenzisa umkhono wethusi wethusi, ongavikeleki kakhulu futhi othuthukisa ukuzinza komshini
1.Servo System Ukwakheka
Ukwakhiwa kwesistimu ye-2.Servo
Impilo yenkinobho ihlolwe ngokuqinile, futhi ayilimazi ngokucindezela ama-1 million times.
Usizo lwephutha lesikrini nomshini, chaza imisebenzi yesikrini, chaza ama-alamu womshini, futhi usize abasebenzisi ngokushesha ukuqonda ukusetshenziswa komshini
Umugqa wokutholwa kombusi we-elekthronikhi ucutshungulwa ngokuzimela, ngamandla anamandla okulwa nokuphazamiseka
Ukulawulwa kwedijithali kwe-servo drive nokuhlanganiswa nedrayivu
I-busbar capacitor isiyonke ithuthukiswe ngokuphelele, futhi i-capacitor enokuguquguquka okuthe xaxa kwezinga lokushisa nempilo yensizakalo ende isetshenziswa, futhi impilo yethiyori yanda ngamahlandla ama-4;
Impendulo ku-50Mpa ingama-50ms, ingcindezi eyeqile ingu-1.5kgf, isikhathi sokukhululeka kwengcindezi ngama-60ms, nokushintshashintsha kwengcindezi ngu-0.5kgf.
Idizayini yokulingisa yenziwa yisoftware ye-Ansoft, futhi ukusebenza kwe-electromagnetic kuphakeme; Kusetshenziswa injabulo enkulu yokusebenza kwe-NdFeB, ukulahleka kwensimbi kuncane, ukusebenza kahle kuphakeme, nokushisa kuncane;
3.Izinzuzo zeServo System
Uma kuqhathaniswa nohlelo lwempompo oluguquguqukayo lwendabuko, uhlelo lwepompo kawoyela lwe-servo luhlanganisa izici zokulawula isivinini esisheshayo esisheshayo se-servo motor kanye nezimpawu zokucindezela uwoyela ezizilawulayo zepompo kawoyela we-hydraulic, oletha amandla amakhulu wokonga amandla, namandla izinga lokonga lingafinyelela ku-30% -80%.
Ijubane lokuphendula liyashesha futhi isikhathi sokuphendula sifushane njenge-20ms, esithuthukisa isivinini sokuphendula sohlelo lwe-hydraulic.
Ijubane lokuphendula okusheshayo liqinisekisa ukunemba kokuvula nokuvala, ukunemba kwesikhundla kungafinyelela ku-0.1mm, futhi ukunemba kokubeka isikhundla okukhethekile kungafinyelela ± 0.01mm.
Ukucaciswa okuphezulu, okuphendula okuphezulu kwe-PID algorithm module kuqinisekisa ukuzinza kwesistimu nokucindezela kokushintshashintsha okungaphansi kuka ± 0.5 ibha, ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Umsindo: Umsindo ophakathi nohlelo lwe-hydraulic servo system ungaphansi kwe-15-20 dB kunalowo wepompo eguquguqukayo yasekuqaleni.
Ithempelesha: Ngemuva kokuthi kusetshenziswe uhlelo lwe-servo, ithempelesha kawoyela ye-hydraulic incishisiwe iyonke, okuthuthukisa impilo yesibonakaliso se-hydraulic noma kunciphise amandla opholile.
I-Photo-Electrical Safety Guard Front nangemuva
Ukukhiya Isilayidi ku-TDC
Izitendi Ezimbili Zokusebenza Kwesandla
Umfutholuketshezi Wokweseka Umshwalense Wokusekela
Ukuvikelwa ngokweqile: Ukuphepha Valve
I-Alarm Level Alamu: Izinga lamafutha
Ithempelesha kawoyela Isexwayiso
Ingxenye ngayinye kagesi inokuvikelwa okugcwala ngokweqile
Amalokhi okhiye ahlinzekwa ngezingxenye ezihambayo
Zonke izinto ezenziwa ngabezindaba zinokuxhumana okuvikelekile, isb. Okuhambisekayo okusebenzayo ngeke kusebenze ngaphandle kokuthi isiguqo sibuyele endaweni yokuqala. Isilayidi asikwazi ukucindezela lapho okusebenzayo kushukumiseka kucindezelwa. Lapho ukusebenza kokungqubuzana kwenzeka, i-alamu ikhombisa esikrinini sokuthinta bese ikhombisa ukuthi yini le ingxabano.
Ithangi le-1.Oil lisethwe ngensimbi yokupholisa uhlelo lokupholisa (idivaysi yokupholisa amanzi yohlobo lwemboni, ukupholisa ngokujikeleza amanzi, i-oyile temperature≤55 ℃, qiniseka ukuthi umshini ungacindezela ngokuqinile emahoreni angama-24.)
Uhlelo lwe-hydraulic lisebenzisa uhlelo oluhlanganisiwe lokulawula i-cartridge valve ngejubane lokuphendula okusheshayo nokusebenza kahle kokudlulisa.
Ithangi likawoyela lifakwe isihlungi somoya ukuxhumana nengaphandle ukuqinisekisa ukuthi uwoyela wokubacindezela awungcolisiwe.
4.Ukuxhumana phakathi kwe-valve yokugcwalisa nethangi likaphethiloli kusebenzisa ukuhlangana okuguquguqukayo ukuvimbela ukudlidlizela ukuthi kungadluliselwa ethangini likaphethiloli futhi kuxazululwe ngokuphelele inkinga yokuvuza kwamafutha.
Langaphambilini H uzimele wensimbi umdwebo ojulile wokubacindezela
Uhlelo lokulawula umfutholuketshezi
I-valve epholile / ye-PROP / ye-servo
Uhlelo lokulawula ugesi
Inzwa yokuhambisa (kuyakhetheka)
Isikhunta lokushisa isilawuli
Isikhunta lokushisa isilawuli (abandayo, hot)